कास्की-२ मा विद्या भट्टराईसंग पराजयपछि खेमराजले भने : नानीलाई हृदयले बधाई, राम्रो गर्नु ! - हाम्रो देश
कास्की-२ मा विद्या भट्टराईसंग पराजयपछि खेमराजले भने : नानीलाई हृदयले बधाई, राम्रो गर्नु !
काठमाडौं : कास्की-२मा भएको उपनिर्वाचन हारेका नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार खेमराज पौडेलले नेकपाकी विजयी उम्मेदवारलाई बधाई दिएका छन्। अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि पौडेलले ट्विटबाटै विजयी उम्मेदवार विद्या भट्टराईलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका हुन्।
‘सम्झिदिनु एक निष्ठावान मान्छे चुनाव हारेर पनि हाँस्दै गयो, जुन प्रक्रियाका लागि अर्पित थियो मेरो जीवन। म ईमानदार रहनेछु कास्कीको म प्रत्येक मत, अनि देशविदेशका हरेकको मायाप्रति’, पौडेलले लेखेका छन्,’राजनीति जितें, मत जितिनँ तर सायद मन जितें कि जस्तो लाग्छ। विजयी नानीलाई हृदयले बधाई-राम्रो गर्नु।’
पौडेललाई आठ हजार बढी मत अन्तरले पराजित गर्दै विद्या विजयी भएकी हुन्। ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि शनिबार उपनिर्वाचन भएको हो। विद्या रवीन्द्रकी श्रीमती हुन्। निर्वाचन आयोगले मतगणनाको अन्तिम परिणाम औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन।